फेसबुकमा पोष्ट गर्दा ५ बर्ष जेल बस्नुपर्ने, बलत्कारीलाई चाँडो कारवाही गर भन्दा गोली ठोक्ने ? – BikashNews
फेसबुकमा पोष्ट गर्दा ५ बर्ष जेल बस्नुपर्ने, बलत्कारीलाई चाँडो कारवाही गर भन्दा गोली ठोक्ने ?
२०७५ भदौ ९ गते १३:४१ भिमप्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव
भिमप्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव
काठमाडौं । कानुन झन् झन् कडा बनाउँदै जाने तर पुलिस प्रशासन र न्यायालयलाई कार्यकुशल नैतिकवान जिम्मेवार स्वच्छ नबनाउने हो भने कडा कानुनको फाईदा तिनले लिने र जनता झन् झन् पिडीत शोषित हुँदै दुःख पाउने अवस्था आउँछ ।
बलात्कारपछिको हत्या हुँदा पनि पुलिस प्रशासन चुप बस्ने र कार्वाहीका लागि हजारौं जनता हप्तौं सडकमा उत्रनुपर्ने ? तोडफोड गर्न उक्साउने, अश्रुग्यास र गोली चलाउने र मान्छे मर्नुपर्ने, मार्नुपर्ने मुलुकमा कडा कानुन भन्दा पनि भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरूरी देखिदैन ।
जनदबाब र जागरूकता बिना कानुनको कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा के कानुन मात्र कडा र कार्यान्वयन गर्ने निकाय र पदाधिकारी लोदर, लालची, नालायक र कसैको राजनतिक हित र अतिरिक्त आम्दानीमैं चोचो गाड्ने, भ्रष्ट रहँदा बोल्न चिच्याउन र जनसमर्थन नपाउने निरिह पिडीतले न्याय पाउने कसरी ? यो गम्भीर विषय हो ।
कडा कानुन पदाधिकारीका निम्ति दुहुनो गाई बन्ने दिशामा त मुलुक गएको छैन ? फेसबुकमा शेयर गरेकै, लेखेकै भरमा ५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, चित्त नबुझेको कुरामा अर्धनग्न भएर प्रोटेस्ट गर्दैमा हप्तौं हिरासतमा बस्नुपर्ने कानुन बनेको कुरामा पनि जनजागरण जरूरी छ । नभए मुलुक पुलिस राज र परपीडनको स्वर्ग बन्दै जाने छ । र मुलुक ध्वस्त हुन सक्ने कुरामा कसैले रोक्न सक्ने छैन ।
कानुन बनाउने बेलामा कानमा तेल हालेर सुत्ने कथित जनप्रतिनिधि सांसद र बुद्धिजीबी र सरकार जे विषयको पनि ह्वीपकै भरमा कानुन पास गराउन खोज्नु पागलपनको दैरा परेकै हो भन्न बाध्य बनाउँदै छ । समाजमा अमनचयनका अनेक पक्ष हुन्छन्, कानुन त्यसमध्ये एकमात्र हो । कानुन पनि अन्य समपुरक योजनाहरू विना निकम्मा हुन्छ र झन् विकृति बढाउदै लैजान्छ।
जनतालाई कानुनको हक र जिम्मेवारीमा सशक्तिकरण गर्दै नगए ती कानुनको फन्दामा परी पारी झन् लुटिने, शोषित हुँदै जानेछन् ।